Goobaha Dalxiiska Magaalada Washington Ee Dalka Maraykanka Oo La Xidhay – somalilandtoday.com
Goobaha Dalxiiska Magaalada Washington Ee Dalka Maraykanka Oo La Xidhay
(SLT-Washington)-Dadka usoo dalxiiska taga magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka ayaa maanta la kulmi doona inay xidhan yihiin goobaha soo jiidashada leh, sababo la xidhiidha hakadka ku yimid qeyb ka mid ah howlaha dowladda Mareykanka.
Lacagta ku bixi jirtay inuu furnaado madxafka Smithsonian ayaa dhamaatay. Sidoo kale carwada qaranka ayaa iyana la xiri doona, waxaana dheer in in xarunta farshaxanka qaranka iyana albaabada la isugu dhufan doono khamiista.
Hakadka ku jira howlaha dowladda Mareykanka ayaa maanta galay maalintii 12-aad ayada oo xisbiga dimoqraadiga uu isku diyaarinayo inuu la wareego hoggaanka aqalka wakiilada Mareykanka.
Marka uu congress-ka cusub ee mareykanka fariisto khamiista, hogaamiyayaasha dimoqraadiga ayaa qorshaynaya inay si deg deg ah u ansixiyaan miisaaniyad cusub oo dib u furta dowladda islamarkaana 800,000 oo shaqaalaha federaalka ah dib ugu soo celiya shaqadooda.
Waxa ay sheegeen in miisaaniyadda aysan ku jiri doonin lacagta uu doonayo madaxweyne Trump inuu darbi uga dhiso xuduudda Mexico, oo markii horeba keentay muraanka dhaliyey in miisaaniyadda 2019 aan la ansixin.
Xubnaha xisbiga Jamhuuriga ee maamula aqalka senate-ka ayaa sheegay inaysan ansixin doonin sharciga aqalka wakiilada, haddii uusan raali ka ahayn madaxweyne Donald Trump.
“Mashruucyada Iyo Takaalliifta La Saarayo Ganacsatada Iyo Muwaadiniintu Waxay U Muuqata In Cid Gaar Ah Lagu Naasnuujiyo…” Xisbiga WADDANI
By Wariye September 16, 2021
Xukuumada Somaliland Oo Guddi U Saartay Dilalka Ka Dhacay Gobolka Sool
(SLT-Hargeysa)-Fadhigii 79aad ee Golaha Wasiirrada Sonmaliland oo uu shir gudoominayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi...
“Waxa Madaxwaynaha Iga Soo Gaadhaya Warar Sheegaya In Doorashadii Madaxtooyada U Wakhtigeeda Ku Qabanayo Oo Aanu Muddo Kordhin Codsan Doonin…,” Faysal Cali Waraabe
11 Sano Kadib, Muuse Biixi Oo Wareejinaya Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE, Masuulka Uu U Xushay Inuu Xilka U Banneeyo, Qori-Isu-Dhiibka Reeraysan Iyo Saamaynta Qaraxa Siyaasadeed
Wararkii Ugu Dambeeyey Xaaladda Siyaasadeed Ee KULMIYE, Madaxweyne Muuse Biixi Oo U Taagan Mar Kale Doorashada...
Saddexda Musharrax Ee Mar Kale Ku Tartami Doona Doorashada Madaxtooyada 2020
(SLT-Hargeysa)-Guddoomiyayaasha xisbiyada Somaliland Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), Faysal Cali Xuseen iyo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi...
By WariyeSeptember 16, 2021
FARMAAJO Oo Shaaciyay Inuu Hakiyay Awooda Raysal Wasaaraha Soomaaliya